Fahefana tsy misy hasina sisa… | NewsMada
Fahefana tsy misy hasina sisa…
Hanao ahoana ihany no ho tohiny sy hiafaran’izao toe-draharaham-pirenena mbola tsy hita be ihany izao? Ho hita eo… Ny tsy takona afenina, tsy to teny intsony ny fitondram-panjakana: tsy eken-teny, tsy mahatanteraka izay lazainy. Na izany aza, mbola misy fahefana ihany? Na manana fahefana fa tsy misy hasina…
Fahefana amin’ny sisasisan’ny herim-pamoretana tsy miaro ny vahoaka sy ny fananany no mbola mampatanjaka na efa mitanjaka noho ny halemena aza? Na ny herin’ny vola sy ny kolikoly, ny kobaka am-bava isan’andro na efa ao anatin’ny tahotra sy hovitra aza… Hahavita inona intsony izay fahefana tsy misy hasina?
Efa tsy to teny amin’ny vahoaka intsony tsinona, na inona lazaina sy atao. Very tanteraka ny fahatokisan’ny maro anisa. Mbola famitaham-bahoaka ihany izay lazaina sy atao? Na famitahan-tena… Izay hoe fahavoazana 50 taona mahery no anilihana ny tsy fahombiazana sy ny fitavozavozana hatramin’izay.
Eo koa ny fandokafan-tena sy fanamarinan-tena fa tsy mbola misy nahavita ny vitan’ny tena tao anatin’izay 50 taona mahery izay. Inona ny eo? Ny vahoaka izao no efa mitsara amin’ny alahelony, ny fampahantrana lalina, ny hetahetany tsy nohenoina, izy tsy nahoana… Heverina sy entina ho toy ny zazabodo sy bado ihany?
Tsy vitan’ny kabary fanambatambazana na fandrahonana na faneriterena intsony izao, na izay fizarana fanomezana kely etsy sy eroa, na mbola fampanantenana an’itsy sy iroa, na fanamarinan-tena ho lehibe tsy meloka na tsy mba diso… Efa iaraha-mahita ny vita: amin’izany, tsy hisy ho voafitaka indroa, intelo…
Mbola azo henoina sy inoana fa marina sy ho tanteraka tokoa ve izay lazaina sy visavisaina? Na fanoloran-tanana io, na fanarahan-dalàna… Efa tsy misy ny fifampitokisana sy ny fifampihainoana. “Raha tsy manan-tsofina hihainoana ny manampahefana, tsy manana loha hitondra izy”, hoy ny ohabolana danoa iray izay.
Hahagaga raha tsy to teny intsony amin’izao? Tsy eken-teny, tsy mahatanteraka izay lazainy…